Ihe ọ Gụ Gụ Karama kalama
Na-a Botụ Kalama Site Aka
Kalama mmiri ara ehi
Karama mkpụrụ osisi
Nnụnụ akwụ akwụ
Kalama mmanụ a .ụ
Kedu ka esi eme karama iko?
site na nhazi na 20-04-29
Bottlesmepụta ọkpọ ọkpọ na-abụkarị: ① Nhazi ihe ndị dị na ya. Gbanyụọ akụrụngwa buru ibu (quartz ájá, ntụ ntụ soda, limestone, feldspar, wdg) iji kpọnwụkwa akụrụngwa mmiri, wee wepụ ihe ndị nwere iron iji hụ na ogo nke iko ahụ. Nkwadebe nke ...
Pickles na ogologo oge nchekwa ma ọ bụ karama dị mma
site na nhazi na 19-12-11
Karama pickle, n'ọtụtụ ndị mmadụ na-ejikarị karama nri ime obodo. N'oge gara aga, ụrọ ala dị ka karama pịkụl pịkụl a mịrị amị, dị mkpa maka ezinụlọ ọ bụla. N'oge ugbu a, ya na ndụ ọsọsọ, pịịl ebidola banye n'ụlọ ahịa ahụ, ịbanye ...
site na nhazi na 19-12-10
Xuzhou Chuancheng Glassware Co., LTD. bụ ụlọ ọrụ na-emepụta ihe nke maara ọkachamara na-arụpụta karama karama, teknụzụ ịkpụ, ngwaahịa ngwaahịa iko dị elu. Companylọ ọrụ ahụ nwere mmiri dị mma, ala na njem ụgbọ elu, na nso ọdụ ụgbọ mmiri Lianyungang. Anyị nwere 5 akpaka p ...
Ihe mmepụta anyị bụ isi
site na nhazi na 19-12-09
Factorylọ ọrụ anyị na-arụpụta ihe karịrị ụdị isi 800: karama mmanụ a ,ụ, karama jam, karama mmanya, karama obe, karama mmanya, karama mmanụ, karama mmanya, karama mmanya ihe ọ ,ụ ,ụ, karama mkpọ afere, karama mmanya, injin karama, mmanya mmanya, mmanya mmanya ...
Denye aha na Akwụkwọ Akụkọ Anyị:
Ime ụlọ 1404, ụlọ 3, junsheng plaza, pailou n'okporo ụzọ, gulou district, xuzhou obodo, jiangsu
Tags na-ekpo ọkụ